Enweta aphasia na nsogbu ịgụ ihe: enyemaka nke teknụzụ ọhụụ - Ọzụzụ Nghọta
Enweta aphasia na nsogbu ịgụ ihe: enyemaka nke teknụzụ ọhụụ
Nkwukọrịta okwu bụ nka dị mkpa maka mmadụ, ọ ga-emerụkwa ya n'ọtụtụ ọkwa n'etiti mmadụ aphasia. Ndị nwere aphasia n'eziokwu, nwere ike ịnwe nsogbu na ikwu okwu, ide ihe, ịgụ na ịghọta ụdị asụsụ ọ bụla. Nnyocha elekwasị anya na mgbake okwu, ọ bụghịkwa ihe ijuanya na ọ dị mkpa nka a na ndụ a na-adị kwa ụbọchị. Otú ọ dị, ntakịrị ntakịrị eleghara anya bụ mpaghara enwere nsogbu ịgụ ihe. Nke a n'agbanyeghị ọgụgụ bụ ihe dị mkpa na ndụ onye ọ bụla n’ime anyị, na ọbụna karị na nke ndị, maka ihe kpatara ọrụ ma ọ bụ ntụrụndụ, na-agụkarị ọtụtụ peeji kwa ụbọchị. Knollman-Porter, na 2019, gosipụtara otu nsogbu isi ọgụgụ nwere ike ibute oke ndaba na ogo nke ndụ (iweda onwe ya ala, obere itinye aka na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, oke nkụda mmụọ) ọbụlagodi ndị na-agụghị akwụkwọ.
e ọtụtụ ọrụ na US na Europe nke dabere na nhazi asụsụ (NLP), dị ka Ọrụ Simplext, nke na-ezube ime ka ihe odide ahụ dị mfe na-akpaghị aka iji kwado ndị nwere aphasia, ma ọ bụ mBỤ (nke a pụtara maka ndị nwere autism) nke na-esochi ma dochie ihe dị na ederede nwere ike ịbụ ihe mgbochi ịghọta.
Nyochaa nke Cistola na ndị ọrụ ibe ya (2020)  lekwasịrị anya na ngwaọrụ ndị e jiri n'oge gara aga iji kwụọ ụgwọ maka nsogbu ịgụ ihe na ndị nwere aphasia site na nyochaa isiokwu 13 achọtara site na ọdụ data dị iche iche. Ndị na-eme nchọpụta gbalịrị ịza ajụjụ ndị a:
Gini bu ngwa oru eweputara iji nyere ndi adighi enwe nsogbu iguta akwukwo aka
Kedu ihe njiri mara nke ngwa ọrụ teknụzụ eji eme ihe nke nwere ike inye aka kọwaa ihe ederede?
Banyere ajụjụ nke mbụ, ọ dị nwute na ọmụmụ a chọtara otu enweghị ngwá ọrụ a kapịrị ọnụ. N'ọtụtụ oge, ejiri ọtụtụ ngwaọrụ ọnụ (dịka njikọ okwu ma ọ bụ nkọwa ederede). E mepụtara ngwaọrụ ndị a, ekwesiri ka ọ pụta ìhè, e meghị ha maka ndị nwere aphasia, mana maka ụmụaka na-eto eto na ndị nọ n'afọ iri na ụma. Ihe ndị a bụ ngwa ọrụ nke nwere ike ịba uru nye ndị mmadụ, mana anaghị ekwekarị idozi nsogbu metụtara ọgụgụ.
Ya mere, ọ dị mkpa ịmepụta ngwá ọrụ a kapịrị ọnụ maka ndị ọrịa aphasic. Akụkụ bụ isi ga-abụ nke nhazi izute ihe isi ike-nghọta na mmegharị.
Fọdụ ihe dị mkpa ga-abụ:
Ogo nke njikọ okwu
Ọsọ nke njikọ okwu
Ikike ịgbanwe oke ederede na oghere n’etiti okwu
Ikike iji gbanwee mkpụrụ okwu ma ọ bụ ahịrịokwu dị mgbagwoju anya ka ọ bụrụ ụdị dị mfe
Ikwubi, a ka nwere ụzọ dị anya ịga. A ga-achọ ngwá ọrụ dị ike na nke nwere ike ịhazi. Agbanyeghị, ọ bụ ihe nwere ike belata nkụda mmụọ, enweghị ntụkwasị obi na ntụkwasị obi na ndị na-elekọta ndị nwere aphasia.
Ọ bụghị naanị na Aphasia nwere mmetụta uche kamakwa ọ na-efu ọnụ ahịa onye ọrịa na ezinụlọ ya. Peoplefọdụ ndị mmadụ, maka ebumnuche akụ na ụba, belata ohere ha nwere ịgbanwe, n'agbanyeghị ihe akaebe na-akwado mkpa ọ dị maka ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ na mgbe niile. Maka nke a, kemgbe Septemba 2020, enwere ike iji ngwa anyị niile n'ịntanetị n'efu GameCenter Aphasia na mpempe akwụkwọ mmemme anyị niile dị ebe a: https://www.trainingcognitivo.it/le-nostre-schede-in-pdf-gratuite/
 Knollman-Porter, K., Wallace, SE, Brown, JA, Hux, K., Hoagland, BL na Ruff, DR, 2019, Mmetụta nke ederede, nyocha, na usoro jikọtara ọnụ na nghọta nke ndị nwere aphasia. Akwụkwọ bụ American Journal of Speech - Pathology Language, 28, 1206–1221.
 G. Cistola, M. Farrús, I. van der Meulen (2020). "Aphasia ma nweta mmeru ọgụgụ. Kedu ihe ndị ọzọ dị elu ọgbara ọhụrụ iji kwụọ ụgwọ maka ụkọ ọgụgụ? " International Journal of Language & Communication Nsogbu.
aphasia, aphasia na teknụzụ ọhụrụ, ọgụgụ
Enweta aphasia na nsogbu ịgụ ihe: enyemaka nke teknụzụ ọhụụ2020-12-172020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/12/ezgif-2-628b5dc636f7.png200px200px
Nọmba VAT: 12727841004 Tel: +393920153949
Ọgwụgwọ nghọta na aphasiaaphasia
Ihe eji ede ederede - ma ọ bụ ihe ngosi - na aphasiaaphasia